सूचना/प्रबिधि Archives - सबैको समाचार
काभ्रेको पाँचखालमा थप दुई जनामा कोरोना पुष्टि
पत्रकार बजगाईको जन्मदिन वृद्धाश्रममा
बिरगंज ब्यवस्तित हुन्छ : प्रहरी उपरीक्षक गङा पन्त
नागरिकता बिधेयकको बिरोधमा नागरिक अभियान र जनमत पार्टी पर्साले बिरोध प्रदर्सन
सरकारी सहयोगमा गौ हत्या,लबजिहाद र धर्म परिवर्तन हुदै :अध्यक्ष पटेल
काभ्रेमा थप एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
वासिङ्टन डिसी, २३ जेठ:विश्वभरी अत्यधिक प्रयोग हुँदै आएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले नयाँ सुविधा थप गरेको छ । गत अप्रिलदेखि अमेरिका र क्यानडामा शुरु गरेको नयाँ सुविधा फेसबुकले अहिले भने विश्वभरीकै लागि खुल्ला गरेको जनाएको छ । अमेरिका र क्यानडाका प्रयोगकर्ताहरूको टिप्पणी र सुझावका आधारमा सुधार गरेर फेसबुकले यो सेवा विश्वव्यापी गरेको हो । नयाँ सुविधा […]
अनलाइन गेमिङका शौखिनहरु पछिल्लो समय ह्याकरहरुको निसानामा पर्न थालेका छन् । हालै सार्वजनिक एक रिपोर्ट अनुसार साइबर अपराधीहरुले एक चर्चित ट्रोजन मालवेयर अर्थात् भाइरसको मद्धतले गेमर्सहरुका डाटा चोरी गरिरहेका छन् । उक्त भाइरसले ह्याकरहरुलाई प्रयोगकर्ताको पासवर्ड चोरी गर्नमा सहयोग गर्दछ । साइबर सेक्योरिटी विशेषज्ञहरुका अनुसार, यो भाइरस निकै खतरनाक छ । यो भाइरसले खासगरी गेमिङका […]
चीनले ल्याउँदैछ डिजिटल मुद्रा, अमेरिकी डलरका लागि खतराको घण्टी
चीनले सन् २०२२ मा एक डिजिटल युआन मुद्रा ल्याउन चाहन्छ, जसको नाम हो इ-आरएमबी । सन् २०२२ मा चीन जाने मानिसहरुले यहीँ नयाँ डिजिटल मुद्रामा किनमेल वा लेनदेन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यो यस्तो मुद्रा हुनेछ जुन देख्न सकिँदैन, न त यसलाई अन्य नोटजस्तै हातमा समाउन सकिनेछ । यो कुनै कल्पना होइन । एउटा समय यस्तो […]
काठमाडौं, पुस २९ : ‘हाइटेक’ अपराधको चुनौति झेलिरहेका राजधानीका प्रहरी हराएका मोबाइल फोन खोज्नमा अल्मलिनुपरेपछि हैरानी परेका छन्। हराएका मोबाइल फोन खोजिदिन भन्दै दबाब दिनेको संख्या दैनिक बढ्न थालेपछि प्रहरी हैरानीमा परेका हुन। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार पछिल्ला दिनमा ७० देखि ८० वटा मोबाइल फोन हराएका उजुरी दर्ता प्रहरीमा हुन्छन्। कहिलेकाहीं त मोबाइल फोन […]
टेलिकमका निर्देशक फेर्ने सरकारको तयारीप्रति कर्मचारीको असन्तुष्टि
मंसिर २७, काठमाडौं–नेपाल टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशको फेरवदल र नियुक्तिबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारप्रति नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी संघले आपत्ति जनाएका छन् । दुवै संगठनले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले दुसञ्चार कम्पनी लिमिटेड निर्देशीकाको ठाडो उल्लघन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति यस्तो […]
फोन ढिलो चार्ज हुन्छ ? यी टिप्स अपनाउनुस्
एजेन्सी। फोनलाई चार्ज गर्न धेरै समय छैन तर छिट्टै चार्ज हुँदैन। फोनलाई घण्टौं चार्जमा राख्दा पनि ब्यट्री फुल नहुने समस्या तपाइलाई पनि परेको होला। फोन एकैपटक चार्ज हुँदैन विस्तारै हुन्छ। यो समस्या पुरानो मात्र होइन नयाँ फोनमा पनि छ। समय नभएको बेला हामी छिटो चार्ज गर्न चाहन्छौं। यदि तपाइँ पनि फोनलाई छिटो चार्ज गर्न चाहनुहुन्छ […]
जुलाई ३१ मा नोकिया एट आउँदै
नोकियाले नोकिया थ्री, नोयिक फाइभ तथा नोकिया सिक्स स्मार्टफोन लञ्च गरिसकेको छ । नोकियाका उपर्युक्त फोनसेटहरुले प्रयोगकर्ताहरुबाट राम्रै प्रतिक्रिया पाइरहेका छन् । अब चाहीँ नोकियाले उच्च मूल्य तथा गुणस्तरको नोकिया एट ल्याउँदैछ । नोकिया ब्राण्डको स्वामित्व लिएको एचएमडी ग्लोबलले नोकिया एट स्मार्टफोन लञ्च गर्न लागेको खबर सार्वजनिक भएको छ । खबर अनुसार आगामी जुलाई ३१ […]
घर तथा कार्यालयका अधिकांश कम्प्युटरमा कहिलेकाहीँ स–साना कमजोरीले पनि समस्या आइरहन्छन् । कम्प्युटरमा काम गर्दै गर्दा गति कम हुने तथा भाइरसले सताउने समस्या अधिकांशले भोगिरहेका हुन्छन् । भर्खरै राम्रोसँग चलिरहेको कम्प्युटर आफैँ स्लो हुन पुग्छ । धेरै समय पर्खंदा पनि कम्प्युटर ओपन हुँदैन । काम गर्दै गर्दा कम्प्युटर हयाङ हुनेजस्ता समस्याहरू नियमित हुन्छन् । कम्प्युटरमा […]
अब ड्युटीमै रोबोट पुलिस !
युएइको दुबईमा रोबोटले पुलिसको ड्युटी गर्न थालेको छ । दुबई पुलिसले रोबोट पुलिस अफिसरलाई ड्युटीमा खटाएको हो । हालका लागि रोबोट पुलिस अधिकारीलाई दुबईका शपिङ मल तथा अन्य पर्यटकीय स्थलहरुको गस्तीमा खटाइएको छ । मानिसहरुले यस रोबोट पुलिसका माध्यमबाट अपराधको सूचना दिन सक्नेछन् । साथै जरिवाना तिराउनमा पनि यसको प्रयोग हुनेछ । यतिमात्र होइन यो […]
फेशबुकले ल्यायाे नयाँ कानुन
लसएञ्जलस । फेसबुकका माध्यमबाट कसैको अश्लील तस्बिर उसको अनुमतिबिना पोस्ट गर्न रोक्नका लागि फेसबुकले तयारी गरेको छ । यस प्रकारको पोस्तलाई रिभेन्स पोस्ट भनिन्छ । फेसबुक यसप्रकारका तस्बिर दोस्रो पटक पोस्ट गर्नका लागि पूर्ण रुपमा रोक लगाउने तयारीमा रहेको छ । यो रोक फेसबुक, म्यासेन्जर र इन्स्टाग्राममा लागू हुने भएपनि ह्वाट्सएपमा भने तत्कालै हुने छैन […]
यी हुन् विश्वमा सबैभन्दा धेरै बिक्ने ५ स्मार्टफोन
विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय टप फाइभ स्मार्टफोन कुन कुन होलान् ? अनुसन्धान संस्था स्ट्राटेजी एनालिटिक्स स्मार्टफोन मोडल ट्रयाकर (एसएमटी) ले विश्वमा हाल सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय स्मार्टफोनको सूचि सार्वजनिक गरेको छ । मार्केट शेयर तथा बिक्रिको आधारमा सन् २०१७ को पहिलो त्रैमासिकमा लोकप्रियताको शीर्ष पाँच स्थानमा रहन सफल स्मार्टफोन यी हुन्: १. एप्पल आइफोन सेभेन: एप्पलको फ्लागसीप […]
पोर्न हेर्ने प्रयोगकर्तामाथि यसरी निगरानी राख्छ गुगल
जेठ ८ – पोर्न एक यस्तो शब्द हो जसबारे हरेक कोहीलाई जानकारी छ र यो गुगलमा सबैभन्दा धेरै खोजी गरिने शब्द मध्येको एक हो । पोर्न वेबसाइट पोर्नहबको वार्षीक रिभ्यु रिपोर्ट अनुसार अमेरिकामा मानिसहरु ११ सेकेन्डसम्म पोर्न हेर्ने गर्दछन् भने भारतमा करिब ९ मिनेटसम्म पोर्न हेरिन्छ । यदि तपाईं पनि अनलाइन पोर्न हेर्नुहुन्छ भने सावधान […]